हात खुट्टाको न’सा बटा’रिएर फु’लेको छ ? यी उपाय अप्नाउनुहोस् – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीहात खुट्टाको न’सा बटा’रिएर फु’लेको छ ? यी उपाय अप्नाउनुहोस्
November 9, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 14919
हरियो गोलभेडाको प्रयोग गर्ने विधि: सबैभन्दा पहिला हरियो गोलभेडालाई राम्ररी पखाल्नुहोस् । पाकेको तर गोलभेडाको रंग हरियो भएको प्रयोग गर्नुहोस् । त्यसपछि यसलाई ०.५ सेन्टिमिटरमा काट्नुहोस् । गोलभेडाको टुक्रालाई नशा फुलेको ठाउँमा लगाउनुहोस् । गोलभेडा राखी पट्टिले बाँध्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंलाई केही जलनको महशुश हुन्छ । एकछिनपछि पट्टिलाई निकाल्नुभई चिसो पानीले पखाल्नुहोस् ।
यस विधिलाई दिनमा पाँच पटकसम्म गर्नुहोस् । २ हप्तापछि तपाईंले यसको परिणामलाई देख्न सक्नुहुनेछ । यस विधिको प्रयोग गर्दा तपाईंलाई केही जलनको महशुश हुन्छ । तर बिस्तारै नशा फुलेको हराउँदै जान्छ ।
रातो गोलभेडाको प्रयोग गर्ने विधि: रातो गोलभेडाको प्रयोग गरी पनि फुलेको नशाको समस्यालाई हटाउन सकिन्छ । यसको प्रयोग तपाईंले रातभरि गर्न सक्नुहुन्छ । सुत्नुभन्दा अगाडि केही गोलभेडालाई स–सानो टुक्रामा काट्नुहोस् ।
त्यसपछि माथिको विधिअनुसार नै यसको प्रयोग गर्नुहोस् । गोलभेडाको प्रयोग ४ घण्टासम्म गर्नुहोस् । यसपछि नयाँ गोलभेडाको प्रयोग गर्नुहोस् । रातभरि नै यसको प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईंले यस उपचारलाई अपनाउनु हुँदा सन्तुलित आहारको प्रयोग गर्न जरुरी छ।
February 6, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 6329
April 11, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 326
November 27, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 12114